"Useyampampa" owanekela umphakathi amahlazo omndeni | News24
"Useyampampa" owanekela umphakathi amahlazo omndeni
Pietermaritzburg - Akasazi uzoshonaphi owesilisa waseClermont owadalulela umphakathi izimfihlo zomndeni ezenza ukuba bakhonjwe indlela endaweni.
Le ndoda yadalula ukuthi ugogo wayo uyathakatha kanti sebebaningi abantu asebashona ngenxa yakhe.
USphamandla Majola, 23, owakhuliswa yilo gogo athi ungumkhokheli webandla elidumile uthi waqala ukwenziswa imikhuba yobumnyama esengumnfanyana eneminyaka engu-7 ubudala.
OLUNYE UDABA:Inkosi ixosha undlunkulu emsola ngokuthakatha
UMajola uthi ukwenza imisebenzi yobumnyama sekubulale inqwaba yabantu kanti ngesikhathi esekudalula lokhu emphakathini wazithola esebalekelwa yiwo wonke umuntu, kwadingiswa umndeni wakhe waphinde wajikelwa nayizihlobo.
UMajola uphinde wathi impilo yakhe ayikaze ifane neyezinye izingane kusukela ebuncaneni bakhe njengoba ugogo wakhe wayebathuma nomzala wakhe ayelingana naye ngeminyaka ukuba bayoganga emzini yabantu.
Ngokuthola kwe-EyethuNews uMajola uthe ugogo wakhe kwakuthi uma bebuya esikoleni ebatshele ukuthi abalale ukuze bezokwazi ukuvuka ebusuku bayosebenza.
Lo gogo wayebavusa phakathi kwamabili ebatshele ukuthi mabakhumule basale ngama-anda bese begibela isilwane esasizobathatha sibabeke la abathuma khona.
UMajola ngemuva kokudalula le mihlola ube esewumuntu ohambe ehlala kanti egcina ukucela usizo bekuyisekhanseleni likawadi 19 elamchitha lathi akaphinde ekhanseleni likawadi 20 la okwadingiswa khona umuzi wakubo.